မြင်းမိုရ်ဦး: Referred pain သို့မဟုတ် ရောဂါတခြား-အနာတခြား
ရောဂါဖြစ်နေသည်ကတနေရာ-နာကျဉ်ခြင်းဝေဒနာခံစားနေရသည်ကတခြားတနေရာဖြစ်သည်ကို Referred pain ဟုခေါ်ပါသည်။ လူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများ-ကလီစာများကို အာရုံကြောများကတဆင့် ဦးနှောက်သို့ဆက်သွယ်ထားသည်။ ဦးနှောက်သို့မရောက်မီ၊ ကျောရိုးအာရုံကြောမကြီးနှင့် ကိုယ်ခန္ဓာအနှံ့အပြားမှ အာရုံကြောလေးများ ဆက်သွယ်ထားသည်။ တချို့အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများမှာ တခုနှင့်တခုဆက်စပ်နေခြင်းမရှိသော်လည်း၊ သက်ဆိုင်ရာအာရုံကြောငယ်လေးများက ကျောရိုးအာရုံကြောမကြီးနှင့်ဆက်သည့်နေရာတွင် နီးကပ်စွာရှိနေတတ်ကြသည်။ တခါတရံ ရောဂါဖြစ်နေသည့်နေရာမှအနာကို၊ တခြားမဆိုင်သည့်နေရာတခုမှ နာသကဲ့သို့ ဦးနှောက်ဆီသတင်းပို့မှားသည့်အခါ၊ အနာကပြင်းထန်လွန်းသောအခါတွင် Referred pain ကိုခံစားရပါသည်။
နှလုံး၊ အဆုတ်၊ အသည်း၊ ကျောက်ကပ်၊ အစာအိမ်၊ သည်းခြေအိတ်စသည့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများမှရောဂါကို အခြားနေရာများတွင် နာနေကျဉ်နေသကဲ့သို့ခံစားရနိုင်ပါသည်။ ဖြစ်ခဲသည်ဆိုသော်လည်းဖြစ်တတ်သောရောဂါလက္ခဏာဖြစ်သဖြင့်၊ ဗဟုသုတသိရှိထားလျှင်၊ မပေါ့ဆဘဲ တတ်ကျွမ်းနားလည်သူဆရာဝန်များနှင့် အချိန်မီပြသနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ခံတွင်း-မေးရိုး-မျက်နှာပိုင်းဆိုင်ရာ referred pain တချို့ကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်-
နှလုံးရောဂါ- လက်ဝဲဖက်ရင်ပတ်အောင့်၊ လက်ဝဲဖက်လက်မောင်း၊ လက်ဝဲဖက်ပုခုံးအောင့်မှသည် အောက်မေးရိုးနာ၊ အောက်သွားများကိုက်သည်အထိ Referred pain ခံစားရနိုင်သည်။
နားကိုက်ခြင်း၊ ထိပ်ကပ်နာ (sinusitis) စသည်မှလည်း သွားကိုက်သည့်ဝေဒနာခံစားရနိုင်သည်။
သွားရောဂါ ကို နားကိုက်ခြင်း၊ မျက်စိကိုက်ခြင်းအနေနှင့်ခံစားရနိုင်သည်။
မေးရိုးဆစ်ရောဂါ (temporomandibular joint disorder) မှ သွားကိုက်၊ နားထင်ကိုက်-ပါးကိုက်ဝေဒနာခံစားရနိုင်သည်။
Trigeminal neuralgia - မျက်နှာမေးရိုးဆိုင်ရာအာရုံကြောမရောဂါ - ဘယ်ဘက် သို့မဟုတ် ညာဘက်မျက်နှာ၊ နားထင်၊ မေးရိုး၊ သွားများ ကိုက်ခြင်း၊ နာကျဉ်ခြင်းကို မကြာခဏခံစားရသည်။ စူးပြီးနာခြင်း၊ ကျဉ်စက်နှင့်တို့ခံရသကဲ့သို့နာကျဉ်ခြင်း၊ တခါတရံမျက်နှာနှင့်လက်ထိမိချိန်လေးတွင်နာခြင်း၊ လေစိမ်းတိုက်ခံရလျှင်နာတတ်ခြင်း။
Posted by Dr. Nyan at 8:12 AM
very knowledgeble post...i always save all ur posts related to health in my computer
Thank you Ma Kyi Kyi and Ma Daisy.
[URL=http://buzzmaven.tk/art.php?n=283922]Who makes generic ultram[/URL]
[url=http://testy-skachat.citybrokergroup.ru/skachat-video-s-y.html] [img]http://s48.radikal.ru/i121/0903/45/dd889f932468.jpg[/img] [img]http://s60.radikal.ru/i167/0903/11/415c94a6276d.jpg[/img] [img]http://i032.radikal.ru/0903/45/315f8f617368.jpg[/img] [/url]
Может, беспричинно, чует немного.
Домовладыка там гостей брать довольно. Skachat video s y
[url=http://testy-skachat.citybrokergroup.ru/skachat-video-s-y.html] Skachat video s y. [/url]